Mmekọrịta Mmekọrịta Ndị Ahịa na Ndụ Ezigbo | Martech Zone
Fraịdee, June 12, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Akụkọ ọkacha mmasị m kachasị mma bụ otu ebe onye ahịa gwara m na oge awa m ji okpukpu abụọ karịa ihe onye asọmpi m kacha nso bụ. Agwara m ya na m ga-enwe obi ụtọ izute ọnụego ahụ mana ọrụ ahụ ga-ewe ya okpukpu abụọ. Ọ kwụsịtụrụ obere oge ka ọ dara na k
Chọghị ka ịnwere usoro ndị ahụ dị egwu pụọ na ndụ n'ezie? Ebe a olee otu o nwere ike isi dị!
Tags: na-akpa ọchị videoahịa ahịammekọrịta ndị ahịaonye na-ere vidiyo